Man Utd oo Janaayo dalab u direysa kubad sameeye Willian. - Caasimada Online
Home Warar Man Utd oo Janaayo dalab u direysa kubad sameeye Willian.
Man Utd oo Janaayo dalab u direysa kubad sameeye Willian.
Sir Alex Ferguson ayaa lasoo werinayaa inuu doonayo inuu lasoo wareego kubad qaabeeyaha kooxda Shakhtar Donetsk Willian wuxuuna diyaar u yahay inuu saxiixiisa ku dagaalamo 24-jirkaan reer Brazil, sida uu qoray wargeyska Caught Offside.
Kooxaha ka dhisan London Chelsea iyo Tottenham ayaa bilihii lasoo dhaafay si aad ah loola xiriirinaayey xidigii hore ee Corinthians, Blues ayaa saxiixiisa hami kale ka galay markii uu Laba gool kaga dhaliyey Stamford Bridge, Man United ayaana hada dooneysa inay saxiixiisa kaga adkaato ayna dalab u dirto bisha Janaayo.
Fergusonayaa doonaya inuu kooxdiisa qadka dhexe ka adkeeyo gaar ahaan booska kubad sameeyaha oo ay ka liidato Red Devels maadaama ay inta badan ku tiirsan tahay kubada garbaha ka yimaada,
United ayaa xilli ciyaareedkii hore Gacmaha PSG ku weysay xidigii qaaliga ahaa Lucas Moura, Tababare SAF ayaana doonaya inuu bedelkiisa u qaato Willian kaasoo uu doonayo inuu keeno Premier League ka dib markii uu horumar ka sameeyey Ukraine.